လသားအရှယျ သမီးလေးဆိုပမေယျ့ အရမျးပွငျပေး ဆငျပေးခငျြနတေဲ့ ဖခငျဖွဈသူ စညျဖွိုးအကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ခငျလှမျး – XB Media & News
လသားအရှယျ သမီးလေးဆိုပမေယျ့ အရမျးပွငျပေးဆငျပေးခငျြနတေဲ့ ဖခငျဖွဈသူ စညျဖွိုးအကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ခငျလှမျး
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ ခဈြသူဘဝကတညျးက လိုကျဖကျလှနျးတဲ့စုံတှဲတှအေဖွဈ ပရိသတျတှရေဲ့ သကျမှတျခွငျးခံရတာ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြသူဘဝမှာကတညျးက ရငျသှေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျး တို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှဈမှာပဲ လကျထပျခဲ့ကွတာ ပဲဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ရဲ့သမီးလေးကလညျး လူ့လောကကွီးထဲကိုရောကျရှိလာပွီဖွဈပွီး ဖဖေေ၊ မမေတေို့ရဲ့ အသညျး ကြျောလေးဖွဈလို့နပွေီဖွဈပါတယျ။
စညျဖွိုးနဲ့ခငျလှမျးတို့ရဲ့သမီးလေး Shandra က အခုဆိုရငျ (၅) လကြျောအရှယျ လသားလေးပဲရှိပမေယျ့ စညျဖွိုးကတော့ သမီးလေးနဲ့ပကျ သတျပွီး စိတျကူးယဉျ သညျးသညျးလှု ပျနတေဲ့အကွောငျးကို ခငျလှမျးက အခုလိုပဲပွောပွလာပါတယျ။ “Shandra အဖလေေ ဖိန ပျပုံတကွေ ညျ့ပွီး သူ့သမီးကို လမျးမွနျမွနျလြှောကျစခေငျြနပွေီတဲ့ 😅. သူ့သမီးက ခုမှ ၅လခှဲ 😅” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
စညျဖွိုးကတော့ လေးဘကျတောငျမသှားသေးတဲ့ (၅)လခှဲအရှယျသာရှိသေးတဲ့ သမီးလေးကိုဆငျပေးခငျြတာတှမြေားပွီး သညျးသညျးလှုပျ ဖွဈ နတောပဲဖွဈပါတယျ။
လသားအရွယ် သမီးလေးဆိုပေမယ့် အရမ်းပြင်ပေးဆင်ပေးချင်နေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ စည်ဖြိုးအကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ချစ်သူဘဝကတည်းက လိုက်ဖက်လွန်းတဲ့စုံတွဲတွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ သက်မှတ်ခြင်းခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူဘဝမှာကတည်းက ရင်သွေးလေးကို ရရှိခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်း တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာပဲ လက်ထပ်ခဲ့ကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့သမီးလေးကလည်း လူ့လောကကြီးထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရဲ့ အသည်း ကျော်လေးဖြစ်လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်းတို့ရဲ့သမီးလေး Shandra က အခုဆိုရင် (၅) လကျော်အရွယ် လသားလေးပဲရှိပေမယ့် စည်ဖြိုး ကတော့ သမီးလေးနဲ့ပက် သတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် သည်းသည်းလှု ပ်နေတဲ့အကြောင်းကို ခင်လွှမ်းက အခုလို ပဲပြောပြလာပါတယ်။ “Shandra အဖေလေ ဖိန ပ်ပုံတေကြ ည့်ပြီး သူ့သမီးကို လမ်းမြန်မြန်လျှောက်ေ စချင်နေပြီတဲ့ 😅. သူ့သမီးက ခုမှ ၅လခွဲ 😅” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ လေးဘက်တောင်မသွားသေးတဲ့ (၅)လခွဲအရွယ်သာရှိသေးတဲ့ သမီးလေးကိုဆင်ပေးချင်တာတွေများပြီး သည်းသည်းလှုပ် ဖြစ် နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀မှာစှနျ့စားပွီး လုပျခဲ့ဖူးတဲ့ ရငျသပျရှုမောခဲ့ရတဲ့ ဗီဒီယို လေးကို တငျပေးလာတဲ့ ပနျကိတျဒါဒါ